नेकपाको बैठकमाथि प्रहरी छापा, १७ नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार, प्रहरीका हाकिम भन्छन्- भन्न मिल्दैन — Sanchar Kendra
नेकपाको बैठकमाथि प्रहरी छापा, १७ नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार, प्रहरीका हाकिम भन्छन्- भन्न मिल्दैन
सिन्धुपाल्चोक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि ओली सरकारले दमन, धरपकड र गिरफ्तारी बढाएको छ । सार्वजनिक भेला सम्मेलन र सभा समेत गर्न नदिने गरी दमनमा उत्रिएको ओली सरकारले नेकपाका आन्तरिक बैठक, छलफलमा समेत हस्तक्षेप गरेर नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्न थालेको छ ।
शुक्रबार मात्रै प्रहरीले सिन्धुपाल्चोमा नेकपा नेता कार्यकर्ताको छलफल चलिरहेका बेला छापा हानेर १७ जना नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको छ । जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कार्कीटारमा संगठनको गतिविधिका लागि बैठक चलिरहेको बेला शुक्रबार राति प्रहरीले छापा हानेको हो ।
गिरफ्तार पर्नेमा जिल्ला सदस्य रञ्जित ठकुरी, धनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्ण मल्ल ठकुरी, मेलम तामाङ, समीर तामाङ लगायत १७ जना छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले नेकपाका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ ।
तर जिल्ला प्रहरी प्रमुख मुकुन्द मरासिनीले भने यस विषयमा जानकारी दिन नमिल्ने बताए । ‘क-कसलाई किन समातिएको भन्ने विषयमा केही जानकारी दिन मिल्दैन ।’ झर्किदै संचारकेन्द्रसँगको टेलिफोनका क्रममा एसपी मरासिनीले भने- ‘अहिले किन भन्ने ? कसले के लेख्यो हामीलाई थाहा छैन, केहि मानिस पक्राउ परेका छन्, उनीहरुको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यति हाे।’
१० फागुनमा राजधानीमा नेकपाले ललितपुरस्थित एनसेल मुख्यालयसहित देशका २ दर्जन बढी जिल्लाहरुमा बम बिस्फोट गराएर एनसेल टावर ध्वस्त गरेको थियो ।जनताको पसिनाबाट जम्मा हुने खरबौँ रुपियाँ घोटाला गरिरहेको एनसेलमाथि प्रतिनिधिमूलक कारबाही गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रष्ट पारेका छन् ।
उक्त बम विस्फोटमा परी एक सर्वसाधारणको ज्यान समेत गएको थियो । तर नेकपाले कारबाहीको क्रममा नख्खुको विष्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङ निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको र दुईजना घाइतेभएकोमा भने पार्टी गम्भीर बनेको बताएको छ । आइन्दा कारबाहीमा यस्तो गल्ती हुन नदिन हदैसम्म सावधानी अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेकपाले पिडित परिवारकाे दुःखमा सक्दो सहयोग गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।
एनसेलमाथिको कारवाहीको विषयमा शनिबार मात्रै महासचिव विप्लवको आलेख सार्वजनिक भएको छ ।हेर्नुहोस् महासचिव विप्लवको आलेख जस्ताको तस्तै
नेपालको अर्थतन्त्रमा एनसेलले लामो समयदेखि लुट मच्चाउँदै आएको आम जनतामा स्पष्ट नै छ । हालसम्म उसले सरकारी प्रमाणअनुसार पनि एक खरब बराबर कर छली गरिरहेको छ भने खरबौँ मुनाफा विदेश पलायन गरिसकेको छ । पार्टीहरूलाई घुस खुवाएर, नेताहरूलाई भ्रष्ट पारेर, कैंयन बेला न्यायक्षेत्रलाई समेत प्रभावमा पारेर आर्थिक भ्रष्टीकरणमा असीमित प्रकारले बढावा दिएको छ । एनसेलले यस्तो नगरोस् र उसलाई उचित कारबाही हुनुपर्छ भनेर पार्टीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको थियो ।
समस्या हल गर्नुको सट्टा उल्टो जनसरकार र पार्टीलाई धम्की दिने, प्रहरी प्रशासनलाई दुरूपयोग गर्ने, राज्यलाई टुप्पीमा समाएर आफ्नो स्वार्थमा घुमाउने गरेकोले जनताको मागअनुसार पार्टीले यो कारबाही गरेको हो । यो कारबाही एउटा चेतावनीकै रूपमा हो । उसले कमजोरी नसच्याएमा देशबाटै बर्खास्त गर्नु सही हुनेछ । कारबाहीको क्रममा नख्खुको विष्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङ निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको र दुईजना घाइते हुनुभएकोमा भने पार्टी गम्भीर भएको छ ।
कारबाहीमा कुनै नागरिकको ज्यानलाई क्षति नहोस् भन्नेमा पार्टी सचेत हुँदाहुँदै कारबाहीमा गुरुङजीको दुःखद् निधन हुनु र उरुषा खड्का, … मानन्धरहरू घाइते हुनु धेरै दुःखको कुरा हो । उहाँहरूको परिवारको दुःखमा संवेदना प्रकट गर्दछौँ । साथै, उहाँहरूको दुःखमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ । आइन्दा कारबाहीमा यस्तो गल्ती हुन नदिन हामी हदैसम्म सतर्क हुनेछौँ भन्ने पनि अनुरोध गर्दछौँ । तर, राज्य सरकारले परिस्थितिबश एकजना नागरिकको मृत्यु भएको दुर्घटनालाई वहाना बनाएर देशलाई असीमित घाटा पु¥याइरहेको एनसेलमाथि गरिएको न्यायपूर्ण कारबाहीलाई अपराधसँग जोड्न खोजेको छ र क्रान्तिकारीमाथि दमन गर्न खोजेको छ ।
मृतक र घाइतेप्रति के सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसमा हाम्रो पार्टी तयार नै छ । तर, सरकारले जसरी एनसेलको खरब बराबरको अपराधलाई सहायक बनाएर बम विस्फोट र मृत्युलाई मुख्य बनाउन खोजेको छ, यो एकदमै दुराशयपूर्ण एवम् षड्यन्त्रपूर्ण छ । यस पहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा एनसेलले पार्टी, नेता र कर्मचारीलाई अरबौँ घुस खुवाएर कर छली गरिरहेको, देशलाई लुट्दै उल्टै दम्भी फूर्ति हाँकिरहेको समाचार छापेकै थिए, जो सत्यको थिए ।
यसलाई बङ्ग्याएर हाम्रो पार्टीमाथि दमन गर्ने जुन खेल सरकारले चाल्दै छ, यो केवल कमिसन खाइसकेका विभिन्न संस्था, व्यक्तिहरूको जनघाती, राष्ट्रघाती कूकर्मलाई ढाकछोप गर्ने र एनसेललाई बचाउने दुर्नियत मात्र हो । यसमा पार्टी एकरत्ति पनि विचलित हुनेछैन ।
कान्तिपुर कैलाश सिरोहियाले चलाएको, भारतको योजनामा प्रचार गर्ने र पैसा कमाउने पत्रिकामा बद्नाम हुँदै गएको छ । यसले नै हो एनसेलका विरुद्ध भ्रष्टाचार र कर छली ग¥यो भनेर अभियान चलाएको । त्यसबेला पनि प्रचार आएको हो, कान्तिपुरले माग गरेको करोडौँ एनसेलले नदिएपछि कान्तिपुर एनसेलविरुद्ध धोती कसेर निस्किएको हो ।
घटनाले के सावित गर्दैछ भने एनसेलले कान्तिपुरको मुखमा सायद गुलियो चटाइदिएको छ । त्यही गुलियोको स्वादमा उसले को बैध र को अबैध, कसलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ र कसलाई छैन, कुन कारबाही स्वीकार्य छ र कुन छैन भनेर वक्वक् गर्न पुगेको छ । कान्तिपुर, नागरिकले के बुझ्नु राम्रो हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको कारबाही कर छली र भ्रष्टाचारको पैसा बाँडिखान नपाएको झोकमा पत्रिका रङ्ग्याउने र भाग पाएपछि कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो लेखेजस्तो मिडिया तस्करी गर्ने धन्दा होइन ।
प्रायः पार्टी, नेताहरूले पैसा खाएर एनसेल, ठूलो जहाज, बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीनलगायतका दर्जनौँ राष्ट्रघाती कार्यमा प्रायः पार्टी र उनीहरूका नेताहरूले अरबौँ, करोडौँ खाएर मुखमा बुजो लगाएर बसेको कान्तिपुर, नागरिकलाई थाहा छैन !? अनि उनीहरूबारे केही व्यङ्ग्य गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्र मिल्छ ? ‘जो मूली उही सूली’ भएपछि तिनलाई कारबाही कसले गर्ने हो त ? उनीहरूको जनघाती, राष्ट्रघाती कार्यले देश र जनतालाई पु¥याएको क्षतिप्रति को जवाफदेही हुन्छ ? के देश नै डुब्दा पनि पत्रिकाको प्रचार सुनेर चुपचाप दुलोमा लुकेर सम्भव हुन्छ !
बीबीसीले प्रश्न गर्दा सोध्यो कि दुःख व्यक्त गरेर, गल्ती भयो भनेर गएको ज्यान फिर्ता आउँछ ? हाम्रो भनाइ ज्यान फिर्ता आउँछ, ज्यान जानु ठूलो कुरा होइन, जे भयो होस् भन्ने कदापि होइन । हामीले कमजोरीहरूलाई सच्याउनैपर्छ तर बीबीसीले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने एनसेलले खरबौँ नेपाली जनताको पैसा लुट्दा, भ्रष्ट तत्वहरूले देशमाथि दर्जनौँ राष्ट्रघात गर्दा कति नेपालीको जीवन गयो ? एकजना होइन, हजारौँको ज्यान गएको छ , हाम्रो त दुःखद् दुर्घटना हो तर एनसेल र भ्रष्ट तत्वहरूको त हाकाहाकी हमला हो, के ती गरिब नेपालीको ज्यान फिर्ता आउँछ त ?! के देश नै बर्बाद भयो अनि देश फर्केर आउँछ त ? सारा देश टाट पल्टिँदा के फर्केर आउँछ त ? पक्कै पनि आउँदैन ।
हामी देश र जनताप्रति पूरै इमानदार छौँ र क्रान्ति केवल उनीहरूकै लागि हो । संघर्षमा केही गल्ती हुन्छन् भने त्यसलाई सच्याउँछौँ तर के एनसेल र भ्रष्ट तत्वहरू देश र जनताप्रति इमानदार छन् ? के उनीहरूले जानीबुझी अपराध गरिरहेका छैनन् ? अनि वास्तविक अपराधीभन्दा हामीलाई समस्या बनाउन मिल्छ ? हामी प्रष्ट भन्छौँ, जसले जे भने पनि अपराधीलाई छुट दिँदैनौँ र दिनुहुँदैन ।
कारबाही एनसेललाई मात्र होइन, त्यसलाई संरक्षण गर्ने, ऊसँग साँठगाँठ गर्नेलाई पनि हुनुपर्छ । यसमा सबै सचेत भए हुन्छ । फेरि पनि हाम्रा प्रतिबद्धता छ कि देशलाई लुट्ने र जनताको रगतमाथि भ्रष्टाचार गर्ने तत्वहरूलाई कडा दण्ड दिनुुको विकल्प जनतासँग छैन । दलाल पुँजीवादी सत्तालाई समाप्त पार्नु र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनामा गर्नु सभ्य नागरिकहरूको अधिकार हो